Mogadishu Journal » 2019 » August » 24
Bandow lagu soo rogay guud ahaan dalka Kenya
Mjournal :-Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan dalka Kenya lagu soo rogay Bandow laga bilaabo 24 ilaa 31 Bishan August. Sidda Mas’uuliyiinta Kenya ay xaqiijiyeen Bandowga ayaa yimid ka dib markii dowladda ay sheegtay in guud ahaan dadka kunool dalka Kenya lagu sameyn...
Somalia has rejected the Commission of the African Union invitation to a briefing on the maritime row with Kenya. Instead, it has expressed confidence in the International Court of Justice and its ability to deliver a fair ruling. The ICJ is set to hear the dispute between...
Former Ras Kamboni Brigade co-founder and close ally of current elected Jubbaland president Ahmed Madobe, Abdinasir Seraar has also been elected ‘president’ of Jubbaland by people opposing the current elected president of Jubaland. The recent elections will see Jubbaland have...
Mjournal :-Danjiraha Soomaaliya ee Qaramadda Midoobay ayaa ku dhawaaqday in Soomaaliya ay si rasmi ah uga horjeedo codsiga ay dowladda Kenya u gudbisay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ee ku aadan in Al-Shabaab si gaar ah loogu daro liiska argagixisada caalamka. Waxaa uu sheegay...
Goormee ayuu bilaaban doonaa Wareegga Koowaad ee Dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya?
Mjournal :-Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa shaacisay in 9-ka bisha Sebteembar ay bilaaban doonto dhageysiga Wareegga Koowaad ee Dacwadda badda ee ka dhex taagan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa shaacisay in xilligaasi si rasmi ah loo dhegeysan doono...
Dowladda Soomaaliya oo ka biyo diida codsi uga yimid midowga Africa
Mjournal :-Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa iska diiday codsi uga yimid guddi ka tirsan Midowga Afrika oo doonayay in wadahadal laga galo xiisada muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Midowga Afrika ayaa doonaya in kiiska muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya si...
Mjournal :-Kooxo Burcad Koonfur Afrikan ah ayaa waxaa ay Gudaha dalkaas ku dileen Muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Soomaalida ku ganacsada dalkaas, xilli uu ku jiray howshiisa caadiga ah ee Shaqo. Kooxda ayaa ku weerartay muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jira...
Mjournal :-Lix dal oo ka tirsan qaaradda Yurub ayaa oggolaaday 356 muhaajiriin Afrikaan ah oo ku go’doonsanaa markab badda Talyaaniga ku sugnaa iney qaabilaan, muhaajiriinta oo in mudda ahba laga hortaagnaa iney Talyaaniga iyo Malta ay galaan. Muhaajiriinta intooda badan oo ka...
Kenya oo ku dhawaaqday in ay heegan galisay ciidamada ku sugan xadka Soomaaliya
Mjournal :-Saraakiisha Ciidamada Booliska Kenya ayaa sheegay iney feejignaan dheeri ah ay geliyeen Ciidamada ammaanka Waqooyi Bari Kenya ka dib markii Kenya ay ka war heshay dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo weerar la damacsan Gobolkaasi. Ciidamo dheeraad ah oo isugu jira...
Mjournal :-Garoonka Diyaaraddaha Magaalada Kismaayo oo la xiray 22 Bishaan ayaa maanta ugu dambeyntii dib loo furay, waxaa sidoo kale la furay wadooyinka soo gala Magaalada Kismaayo oo xirnaa, islamarkaana uu sameyn ku yeeshay Amarkii lagu xiray Cirka, dhulka iyo Badda Magaalada...
Mjournal :-Mesut Ozil ayaa laga yaabaa inuu safto kulankiisii ugu horeysay ee Arsenal marka ay u safraan Liverpool Sabtida. Gunners ayaa ku sii jeedda Anfield iyadoo Ozil uu mar kale diyaar yahay ka dib markii uu fasax qaatay sababo la xiriira hanjabaado dhanka amaanka ah oo uu...
Mjournal :-Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa shaaciyay in uu dowladda Jabuuti uu ku taageeri doono Ololaha ay Ugu jirto kursiga Afrika ee Qaramada Midoobey oo ay ku tartamaayay dalalka Kenya iyo Jabuuti. Codeyntii midowga Afrika ee Cidda Kursigaasi ku mataleysa Afrika ayaa waxaa ku...